मुसाले तार काटेरै होला आजकल बत्ति गइरहेको ? - सिम्रिक खबर
मुसाले तार काटेरै होला आजकल बत्ति गइरहेको ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले मर्मतसम्भार गर्न भन्दै ठाउँ-ठाउँमा केही समयका लागि बिजुली काट्ने गरिएको सूचना दिने गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पटक मङ्गलवार भूमिगत तार फेर्न भन्दै काठमाण्डूका बानेश्वर र सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका स्थानमा बिहान ७ बजेदेखि ९:३० बजेसम्म विद्युत्‌ आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो। आइतवार काठमाण्डूकै लैनचौरस्थित प्राधिकरणको सबस्टेशनको एउटा प्यानल बोर्डभित्र छिरेर मुसाले तार काटिदिएपछि विद्युत्‌ आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुगेको समाचारले निकै चर्चा पायो। कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यसलाई प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि फेरि लोडशेडिङ हुने पूर्वसङ्केत पो हो कि भनेर आशङ्का व्यक्त गरे।
‘स्याल कराउनु, कुखुरा हराउनुजस्तै’ – तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन्। प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी लीला अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भनिन्, “त्यस्तो केही होइन। अहिले ‘स्याल कराउनु, कुखुरा हराउनु’जस्तै भएको हो।” विद्युत्‌ व्यवस्थापनका लागि धेरैबाट प्रशंसा बटुलेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत भदौ २९ गते प्राधिकरणको चारवर्षे नेतृत्वबाट अवकाश पाएका थिए। केही दिनअघि पनि प्राधिकरणले लोडशेडिङलाई लिएर भइरहेका अड्कलबाजी तथा टीकाटिप्पणीबारे एउटा विज्ञप्तिमार्फत्‌ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।नियमित रूपमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार तथा प्रणालीमा सुधारको कार्य गर्नुपर्दा विद्युत्‌ आपूर्ति विच्छेद गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा विद्युत्‌ आपूर्तिमा निर्धारित समयसम्म अवरोध हुने गर्छ।” “यदाकदा विद्युत्‌ आपूर्तिमा आउने अवरोधलाई जोडी अब लोडशेडिङ हुन थाल्यो भन्‍ने जस्ता अफवाह सुनिने गरेको” भन्दै प्राधिकरणले त्यसमा “कुनै सत्यता नभएको” जनाएको थियो।
मुसाले पुर्‍याउने क्षति कस्ता? अधिकारीहरूका अनुसार कहिले हावाहुरी र वर्षाका कारण बिजुलीको खम्बा ढल्दा त कहिले ट्रान्सफर्मर पड्केर पनि विद्युत्‌ आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ। मर्मतसम्भारका लागि प्राधिकरण स्वयंले पनि समय निर्धारण गरी बिजुली काट्ने गर्छ। तर त्यसबाहेक बेलाबखत मुसा पनि नियमित बिजुली आपूर्तिमा ‘खलपात्र’को रूपमा देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बीबीसी न्यूजी नेपालीसित भने, “एउटा कुरा मुसाले तार काटिदिँदा लाइन विच्छेद हुन्छ भने अर्को कुरा मुसाले तार काट्दा दुइटा तार जुध्यो भने स्पार्क भएर समस्या आइदिन्छ।” उनका अनुसार मुख्य तारका साथै प्यानल बोर्डमा रहेका उपकरणका सहायक तारहरू मुसाले काट्ने गरेका उदाहरण छन्।